Bogga ugu weyn » Book » Waxaad dalban kartaa buugaaga macmacaanka ah ee macmilka ah ee Keto
Maxaad sameysaa markaad iskudayeyso inaad raacdo qorshaha cuntada keto laakiin aad jeceshahay macmacaanka? Dadka badankood, waxay ku dhibtoonayaan inay helaan macmacaan ku habboon cuntada ketogenic. Waxaad ubaahantahay inaad lahaato xirfado cunto karin oo dhab ah si aad udiyaariso macmacaanka dhadhanka leh adigoon isticmaalin waxyaabaha aan la ogoleyn ama waxaad ubaahantahay keto ku saleysan cuntooyinka macmacaanka ah inaad raacdo. Midkoodna la'aanteed, sameynta macmacaan loo aqbali karo keto way adkaan doontaa in la sameeyo. Soo bandhigida macmacaanka Keto!
Gudaha Keto Sweets cookbook, waxaad kaheli doontaa 80 keto oo macmacaan macmacaan ku dhisan oo ay kujiraan macmacaano kaladuwan sida qaniinyada subagga bunni, shukulaatada qaniinyada hilibka doofaarka, jalaato keto, bunni casaan ah, shukulaatada cufan, baararka liin, keto popsicles , Cows sandies, jilif shukulaatada jilicsan, iyo inbadan.
Sidoo kale waxaa ku jira amarkaaga 3 hadiyado bilaash ah. Waxaad heli doontaa Qorshaha Cuntada Keto ee 7 maalmood ah, Hagaha Keto Macmacaan ee Keto & Hagaha Waxyaabaha ay ka kooban yihiin, iyo Hagaha Bilawga ah ee Keto